ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဦး နှောက်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့် Cortical Folding: Gyrification လျှော့ချခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထား (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့် cortical ခေါက်: Gyrification အတွက်လျော့ချရေးတို့အတွက်အထောက်အထား (2014)
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014;9(1): e84914 ။
ဇန်နဝါရီ 15, 2014 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0084914
ဒံယလေက Klein,1,2 အန္န Rotarska-Jagiela,1 Erhan Genc,1,2 Sharmili Sritharan,1,2 Harald Mohr,3,4 ဖရက်ဒရစ် Roux,1,2 cheol အီးဟန်,5 Marcus ခိုင်ဆာ,5,6 ဝံပုလွေအဆိုတော်,1,2,7 နှင့် ပတေရုသဂျေ Uhlhaas1,2,8,*
မောရစ် Ptito, Editor ကို
ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း cortical ဆားကစ်၏အဓိကပြုပြင်မွမ်းမံမီးမောင်းထိုးပြကြပြီ။ ဤရွေ့ကားမီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM က) ၏လျှော့ချ, cortico-cortical ဆက်သွယ်မှု၏ myelination အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အကြီးစား cortical ကွန်ရက်များ၏ဗိသုကာပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သည်။ ဒါဟာသို့သော်ဘယ်လိုအနှောက် cortex ၏ခေါက်နှင့်မည်သို့ gyrification ပြောင်းလဲမှုများ GM က / WM-အသံအတိုးအကျယ်, အထူနဲ့မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ရငျ့ဆက်စပ်ပေါ်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များသက်ရောက်မှုလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့3နှင့် 79 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားက high-resolution ကို (34 တက်စလာ) သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) 45 ကျန်းမာဘာသာရပ်များ (12 အထီးနှင့်အ 23 အမျိုးသမီး) မှဒေတာများဝယ်ယူခြင်းနှင့်အတူ cortical ခေါက်ပုံစံများတပြင်လုံးကိုဦးနှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေ အဆိုပါ gyrification အညွှန်းကိန်း (GI) ။ GI-တန်ဖိုးများအပြင်ကျနော်တို့ cortical အထူ, မျက်နှာပြင်ဧရိယာ, GM, gyrification ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူဆက်စပ်မှုခွင့်ပြုထားတဲ့အဖြူရောင်ကိစ္စ (WM) ပမာဏ၏ခန့်မှန်းချက်ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ precentral, ယာယီနှင့်တိုကျရိုကျဒေသများပါဝင်သည်ရာအများအပြား cortical ဒေသများတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း GI-တန်ဖိုးများအတွက်သိသာနှင့်ကျယ်ပြန့်လျှော့ချပြသပါ။ gyrification အတွက် Decrease GM က၏အထူ, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်မျက်နှာပြင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်နှင့်တစ်ဦး linear ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဒုံးကျည်သွားလမ်းအားဖြင့်ခြုံငုံသွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ GI-တန်ဖိုးများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလျှော့ချသိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်ပတ်သက်သောစေခြင်းငှါအရာနှောင်းပိုင်းတွင်ဦးနှောက်ကိုရငျ့စဉ်အတွင်းနှောက် cortex တစ်ဦးအပိုဆောင်း, အရေးကြီးသောပြုပြင်မွမ်းမံကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကာလအတွင်းအလုပ်၏တစ်ဦးကကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ် cortical ဆားကစ်၏ဆက်လက်ရငျ့အဘို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည် -။ Huttenlocher များ၏လေ့လာရေးနှင့်အတူစတင်ခြင်း  Synaptic အဆက်အသွယ်များ၏အရေအတွက်မှတ်သားလျှောက်လျော့နည်း၏, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) လေ့လာမှုများ (GM က) မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အထူအတွက်အသံထွက်လျှော့ချထုတ်ဖော်ခဲ့ကြ , ။ ဆနျ့ကငျြ, အဖြူရောင်အမှုပမာဏ (WM) cortico-cortical ဆက်သွယ်မှု၏တိုးတက် myelination ၏ရလဒ်အဖြစ်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီး -။ ပိုများသောမကြာသေးမီကသုတေသနပြု GM က / WM အတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံအသက်တာ၏တတိယဆယ်စုနှစ်အတွင်းသို့တိုးချဲ့ကြောင်းညွှန်ပြထားပြီး ,  နှင့်ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များ၏အကြီးစားအဖွဲ့အစည်းကပြောင်းလဲမှုများပါဝင်ပတ်သက်နေ ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော schizophrenia အဖြစ်စိတ်ရောဂါမမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက်အရေးကြီးသောသဲလွန်စ, ကိုင်ထားရသောလူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အရေးပါသောကာလအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အရေးပါမှုသို့ဝတ္ထုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ဤတွေ့ရှိချက်များ, ပုံမှန်အားကျမှုကိုထငျရှားလူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအရာ , .
GM က / WM ၏ volume ထဲမှာပြုပြင်မွမ်းမံကျယ်ကျယ်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြီနေစဉ်, အတော်လေးနည်းနည်းအထောက်အထား cortical မျက်နှာပြင်၏ခေါက်အတွက်ရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲအပေါ်တည်ရှိ။ လူမှာဦးနှောက် cortex က၎င်း၏ကွဲပြားဝိသေသလက္ခဏာများများထဲမှတစ်ဦးကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့် cortical မျက်နှာပြင်မှဦးဆောင်မယ့်မြင့်မား convoluted ခေါက်ပုံစံအဖြစ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ, လူ့ cortex ၏မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ပျမ်းမျှနှုန်းတစ်ဆယ်ဆမျောက်များမျောက်များ၏ထက်ပိုကြီးတဲ့ရှိသောနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ထူ ။ လူမှာတိုးလာ cortical မျက်နှာပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာရုံခံခြင်းနှင့်နေရာချပေးနိုင် cortico-cortical ဆက်သွယ်မှုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ cortical ခေါက်ပုံစံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများမှဘာသာရပ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ သန္ဓေသားဘအတွက်5လအတွင်းပြီးနောက် cortical ခြံပေါ်လာအနည်းဆုံးပထမဦးဆုံးရွှေ့ဆိုင်တစ်နှစ်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုဆက်လက် ။ အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွင်း gyrification ထပ်မံတိုးမြှင်၏ဒီဂရီနှင့်ယခုအထိအဲဒီနောက်တည်ငြိမ်မှယူဆထားသည်။ post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာအမ်းစထရောင်း et al အားဖြင့်လေ့လာဆန်းစစ်။ သို့သော်လူကြီးအထိလျှော့ချခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပထမဦးဆုံးနှစ်တိုင်အောင် cortical ခေါက်ထဲမှာသိသိသာသာရခဲ့ပါတယ်လေ့လာသည်။
ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဦးနှောက်ရငျ့စဉ်အတွင်း GI-တန်ဖိုးများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြရသောမကြာသေးမီ MRI-လေ့လာမှုများကထောက်ခံသည်။ Raznahan et al ။  မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း gyrification အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျဆင်းခြင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက Mutlu et al ။  GI-တန်ဖိုးများစုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကနေဒေတာတွေကိုနှင့်ကိုက်ညီသောအရာတိုကျရိုကျနှင့် parietal cortical အတွက်အသက် 6-29 နှစ်အကြားကျဆင်းသွားကြောင်းပြသ  အဘယ်သူသည်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏သေးငယ်တဲ့နမူနာဆီသို့ဦးတည် gyrification တိုင်းတာခြင်းတစ်ဝတ္ထုချဉ်းကပ်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Hogstrom et al နေဖြင့်ဒေတာများ။  gyrification အတွက် modfications အသက်ကြီးသည်အထိဆက်လက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ MRI-ဒေတာအတွက်မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက် GI-တန်ဖိုးများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှတဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း gyrification ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများငှါရှာကြံလေ၏။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အသက်အရွယ်-မှီခို gyrification ပြောင်းလဲမှုများနှင့် GM က / WM parameters တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆုံးဖြတ်ရန် GM က-parameters တွေကို (cortical အထူ, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်မျက်နှာပြင်ဧရိယာ) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် WM-အသံအတိုးအကျယ်ခန့်မှန်းချက်ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုထပ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသော GI-တန်ဖိုးများအတွက်ကျယ်ပြန့်လျှော့ချရေးဒါပေမယ့်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနှောက် cortex ၏ဖြစ်ပွားနေသောခန္ဓာဗေဒပြုပြင်မွမ်းမံမီးမောင်းထိုးပြသည့်ထိုကဲ့သို့သော precentral ၌ရှိသကဲ့သို့ GM က-ပြောင်းလဲမှုကွဲပြားဒေသများ, ယာယီနှင့်တိုကျရိုကျဒေသများ, ပြသပါ။
85 နှင့် 36 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြား 49 ညာသန်ပါဝင်သူ (12 အထီးနှင့်အ 23 အမျိုးသမီး) ဒေသခံက high-ကျောင်းများနှင့် Goethe တက္ကသိုလ် Frankfurt ကနေစုဆောင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်၏ရှေ့တော်မှောက်, အာရုံကြောနာမကျန်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ပြခဲ့ကြသည်။ Written အသိပေးသဘောတူညီခကျြအားလုံးပါဝင်သူများအနေဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။ 18 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်သင်တန်းသားများအဘို့, ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့မိဘပေးထားခဲ့သည်။ အဆိုပါဟမ်ဘာဂါ-Wechsler ထောက်လှမ်းရေးစမ်းသပ်ခြင်းဘက်ထရီ (HAWI-E / K) ,  ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ခြောက်လသင်တန်းသားများကိုချို့တဲ့သို့မဟုတ်မပြည့်စုံ MRI-အချက်အလက်များ၏အကြောင်းရင်းဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု Goethe-တက္ကသိုလ် Frankfurt ၏ကျင့်ဝတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေ RF ဂီယာနဲ့ signal ကိုဧည့်ခံတစ်ဦးက CP ခေါင်းကိုကွိုင်သုံးပြီးတစ် 3-တက်စလာ Siemens Trióစကင်နာ (Siemens, Erlangen, ဂျာမနီ) နဲ့ရယူခဲ့ကြသည်။ အချိန်အထပ်ထပ် (TR): ။ 1 ms, အချိန်ပဲ့တင်သံ (TE): ကျနော်တို့ T3 မာန်တင်းသုံးဖက်မြင် (2250D) သံလိုက်အောက်ပါ parameters တွေကိုနှင့်အတူ Rapid သိမ်းယူမှု Gradient: Echo (MPRAGE) sequence ကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြု 2.6 ms, အမြင်လယ်ကွင်း။ (FOV): 256 × 256 မီလီမီတာ3, အချပ်: 176 နှင့် 1 × 1 × 1.1 မီလီမီတာတစ် voxel အရွယ်အစား3.
MRI-အချက်အလက်များကို FreeSurfer-software ကိုဗားရှင်း 5.1.0 (၏မျက်နှာပြင်နဲ့ volume ပိုက်လိုင်းနှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu) ,  နှင့် cortical အထူ, GM- နှင့် WM- အသံအတိုးအကျယ်, cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာသည် 3-D ကိုဒေသခံ gyrification ညွှန်းကိန်း (lGI) ၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့် intracranial အသံအတိုးအကျယ် (eTIV) ရရှိသောခဲ့ကြသည်ခန့်မှန်းပါတယ်။ အဆိုပါစံ FreeSurfer ပိုက်လိုင်းနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်နှင့်အလိုအလျှောက်ပြန်မဆောက်မျက်နှာပြင်များတိကျမှန်ကန်မှုများအတွက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခဲ့ကြသည်နှင့်အ FreeSurfer ဆုံးမခြင်း tools တွေကိုသုံးပြီးလိုအပ်သောလျှင်, လက်စွဲစာအုပ်ကြားဝင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
pre-အပြောင်းအလဲနဲ့ Talairach အသွင်ပြောင်း, မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူကိစ္စနယ်နိမိတ်၏ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်း, ပြင်းထန်မှုပုံမှန်မဟုတ်သောဦးနှောက်တစ်သျှူးဖယ်ရှားခြင်း, segment နှင့် tessellation အလိုအလျောက် topology ဆုံးမခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပုံပျက်သောပါဝင်သည်နှင့်အခြားနေရာများတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် , -။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအလင်းဆုံ Atlas မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်းနှင့် cortical ရဲ့မျက်နှာပြင်တစ် gyral / sulcal အခြေစိုက်ကှကျ hemisphere နှုန်း 33 cortical ဒေသများလြှော့ပေးသောအကြားတစ်ဦးချင်းစီဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတို့အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် .
အထူ, cortical ရဲ့ Surface Area နဲ့ GM က-အသံအတိုးအကျယ် cortical
cortical အထူကတော့ tesselated မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသီးအသီးနေရာ (vertex) မှာ WM- နယ်နိမိတ်နှင့် GM က-ကိစ္စမျက်နှာပြင်အကြားအကွာအဝေးအဖြစ်တိုင်းတာခဲ့သည် ။ cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာမြေပုံတစ်ဦးစံမျက်နှာပြင် tessellation အတွက်တစ်ဦးချင်းစီတြိဂံ၏ဧရိယာခန့်မှန်းချက်မှတစ်ဆင့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည် ။ ဧရိယာခန့်မှန်းချက်တစ်ဦးအလင်းဆုံ Atlas မှတ်ပုံတင်အားဖွငျ့တစ်ဦးချင်းစီ cortical အာကာသမှပြန်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်ခဲ့သည် ။ ဒါကဆွေမျိုး areal တိုးချဲ့သို့မဟုတ်ချုံ့၏ vertex-by-vertex ခန့်မှန်းချက်လြှော့ ။ GM က-ပမာဏ၏ခန့်မှန်းချက်ကတော့ cortical မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် cortical ထူအစီအမံများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ vertex ပတ်လည်ရှိဧရိယာကနေဆင်းသက်လာခဲ့သည် .
3-D ကိုဒေသခံ gyrification အညွှန်းကိန်း (lGI)
တစ်ဦးက 3-D ကို lGI တွက်ချက်ခဲ့သည်  ယခင် MR-လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးချခဲ့ပြီးဖြစ်သော , ။ cortex မျက်နှာပြင်၏ပမာဏကို sulcal ခြံအတွင်းသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံအဖြစ်အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, lGI အကျိုးစီးပွားမြို့ပတ်ရထားဒေသများတွင်မြင်နိုင် cortex ၏ပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ gyrification ၏ဒီဂရီသတ်မှတ်ပါတယ်ရှိရာ cortical ရဲ့မျက်နှာပြင်တစ် 3-D ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကပါဝင်ပတ်သက် ။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများတွင်တင်းကျပ်စွာ pial မျက်နှာပြင်ထုပ်ထားတဲ့ triangulated ပြင်မျက်နှာပြင်တစ် morphological ပိတ်ပွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ pial တစ် binary အသံအတိုးအကျယ်သို့ mesh ပြောင်းလဲပြီးနောက်ကျနော်တို့နယ်ပယ်ထုတ်လုပ်ဘို့အတွက်အဓိက sulci ပိတ်ဖို့ရန် 15 မီလီမီတာတစ်ဦးချင်းကိုအသုံးပြု ။ အကျိုးစီးပွား (Roi) ၏မြို့ပတ်ရထားဒေသအတွက်ကျနော်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံး resolution ကိုရရှိရန်တစ်ဦးထက်ပို sulcus ထည့်သွင်းရန် 25 မီလီမီတာတစ်ဦးချင်းဝက်ကိုရှေးခယျြ ။ တစ်ဦး vertex ၏ကနဦး lGI-တန်ဖိုး pial မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြင်ရွယ်၏မျက်နှာပြင်နှင့်မျက်နှာပြင်အကြားအချိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ စာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ်ဘို့, ပြင် lGI-တန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးချင်းစီပြန်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည် interindividual sulcal misalignment လျှော့ချထားတဲ့ system ကိုသြဒိနိတ် .
ကှကျ cortical GM က-ဒေသများအောက်ကဒေသဆိုင်ရာ WM-အသံအတိုးအကျယ်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဖြူကိစ္စ voxel သက်ဆိုင်ရာ5gyral အမည်တပ်ထားသော GM ကဒေသများ၏ 33 WM-volumes ကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့ 33 မီလီမီတာ၏အကွာအဝေးကန့်သတ်နှင့်အတူအနီးဆုံး cortical GM က-voxel မှတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်  အရာယခင်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည် , .
ခန့်မှန်းခြေ intracranial အသံအတိုးအကျယ် (eTIV)
အဆိုပါ FreeSurfer ပိုက်လိုင်းအတွင်းခန့်မှန်းခြေ intracranial Volume ကို (eTIV) တစ်ခု Atlas ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ တစ်ဦး Atlas ပစ်မှတ်မှတစ်ဦးချင်းကိုက်ညီရန်အသံအတိုးအကျယ်-ချုံ့ချဲ့အချက်ကိုကိုယ်စားပြုသော Atlas စကေး Factor (ASF), တဆင့်ချင်းစီ eTIV ၏တွက်ချက်မှုဖျော်ဖြေခဲ့ကြ .
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုခြေလှမ်းများအတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် ပုံ 1။ အားလုံး 79 သင်တန်းသားများ၏ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်ကို hemisphere ၏မျက်နှာပြင်များပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်များနှင့်တစ်ဦးချင်းမျက်နှာပြင်ပျှမ်းမျှအလင်းဆုံညှိနှိုင်းသည့်စနစ်သို့ resampled ခဲ့ကြသည်။ ဆူညံသံအချိုးဖို့ signal ကိုတိုးမြှင့်ဖို့, ကျနော်တို့ lGI များအတွက်တစ်ဝက်အများဆုံး (FWHM) cortical အထူ၏ခန့်မှန်းချက်အဘို့ချောမွေ့, GM- အသံအတိုးအကျယ်နှင့် cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် 20 မီလီမီတာ FWHM မှာ5မီလီမီတာ Full-width ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Anatomical န့်သတ်ချက်များ (GM က / WM-အသံအတိုးအကျယ်, cortical ရဲ့ Surface Area နဲ့ cortical ထူ) နှင့်အတူ lGI-တန်ဖိုးများနှင့်ဆက်စပ်မှုဘို့ခြေလှမ်းများကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက်, ကျွန်တော်တစ်ဦး vertex-by-vertex ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက် lGI-တန်ဖိုးများ, cortical အထူ, cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် GM က၏အသံအတိုးအကျယ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ တစ်ဦးကအထှထှေ Linear မော်ဒယ် (GLM) သည်ကွဲပြားခြားနားသောခန္ဓာဗေဒ parameters တွေကို (lGI, cortical အထူ, cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် GM က-အသံအတိုးအကျယ်) ရက်နေ့မှာအသက်အရွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အလုပ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျား, မများနှင့် eTIV ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားစဉ်အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကအယူမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းကိုချဉ်းကပ် (FDR) အလုပ်  cortical အထူ, မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် lGI ခန့်မှန်းချက်အဘို့အက q 0.05 နှင့်က q 0.005 ၏ GM က-အသံအတိုးအကျယ်တစ်စံနှုန်းနှင့်အတူမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့ပြင်ပေးရန်။ ကွဲပြားခြားနားသောစာရင်းအင်းတံခါး cortical အထူ, cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် GM က-အသံအတိုးအကျယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ lGI-တန်ဖိုးများအတွက်ကျယ်ပြန့်, အသက်-မှီခိုပြောင်းလဲမှုများရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်အရွယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ2 နှင့်အသက်အရွယ်3 အသက်အရွယ်, ကျားမနှင့် eTIV ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဘို့အထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်သမျှသောခန္ဓာဗေဒ parameters တွေကိုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
ဧရိယာအရွယ်အစားခန့်မှန်းချက်ရရှိရန်, ကျနော်တို့ (အကြီးဆုံး lGI-တန်ဖိုးများနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ Talairach သြဒီနိတ်နှင့်အတူ vertices ရွေးချယ် FreeSurfer အတွက်အော်တို mri_surfcluster function ကိုလျှောက်ထားhttp://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/mri_surfcluster) ။ ထို့အပြင် Cohen'sd (12-14, ဎ = 13 အသက်အရွယ်): အငယ်ဆုံးအတွက်ယုတ်တန်ဖိုးများအကြားနှိုင်းယှဉ်မှတဆင့်အကြီးဆုံးအသက်အရွယ်-မှီခိုအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဦးနှောက်ဧရိယာများအဘို့အရယူခဲ့ပါသည် (အသက် 21-23, ဎ = 18) နှင့်အသက်အကြီးဆုံးပါဝင်သူအုပ်စုသည်။ ဆိုးကျိုးများအရွယ်အစားပုံဒဏ္ဍာရီအစီရင်ခံရသည်။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် Pearson ဆက်စပ်မှုကိန်းများကိုအသက် - မှီခိုသော lGI - သက်ရောက်မှုများနှင့် cortical အထူ၊ cortical မျက်နှာပြင်andရိယာနှင့် GM / WM - volume ပြောင်းလဲမှုများအကြားလေ့လာသည်။ WM-volume data များကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုအခြေခံသည့်ဒေသဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေါင်လိုက် -by-vertex မှ vertices လေးခုသည်အသက်အရွယ် lGI သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ hemisphere တစ်လုံးစီအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (စာရင်းအင်းခုံ p <၁၀)-4) FreeSurfers မှတာဝန်ကျအခြေစိုက်ဒေသများ gyral  သက်ဆိုင်ရာတံဆိပ်များ cortical ထူဆိုလိုနှင့်, GM က / WM-အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အ cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။
lGI အတွက်အသက်အရွယ်-မှီခိုပြောင်းလဲမှုများ vertex-by-vertex ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
lGI-တန်ဖိုးများ (လက်ျာဘက် hemisphere အတွက်လက်ဝဲနှင့် 12 ပြွတ် (10 မှာ FDR) တွင် 0.005 ပြွတ်အတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူလျော့နည်းသွားပုံ2နှင့် and3,3, စားပွဲတင် 1) ။ အကြီးဆုံး lGI-လျှော့ချနှင့်အတူဦးနှောက်ဒေသများဘယ်ဘက် precentral (ဧရိယာအရွယ်အစား = 22211.63 မီလီမီတာမှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီခဲ့သည်2, p = 10-8.42, BA ဘွဲ့6နှင့် 7), သာလွန်-တိုကျရိုကျ (ဧရိယာအရွယ်အစား = 3804.76 မီလီမီတာ left2, p = 10-5.69, BA ဘွဲ့ 10), left ယုတ်ညံ့-ယာယီ (ဧရိယာအရွယ်အစား = 2477.53 မီလီမီတာ2, p = 10-4.61, BA ဘွဲ့ 19, 20 နှင့် 37), left နှစ်ဦးနှစ်ဖက်-orbitofrontal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 1834.36 မီလီမီတာ2, p = 10-4.45, BA ဘွဲ့ 47 နှင့် 11) နှင့်ညာဘက် precentral cortex (ဧရိယာအရွယ်အစား = 12152.39 မီလီမီတာ2, p = 10-7.47, BA ဘွဲ့6နှင့် 7), ညာဘက် triangularis (ဧရိယာအရွယ်အစား = 271.76 မီလီမီတာဆန်းစစ်မှု2, p = 10-4.57, BA ဘွဲ့ 10 နှင့် 46), ညာဘက် rostral-middlefrontal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 1200.69 မီလီမီတာ2, p = 10-4.57, BA ဘွဲ့ 9) နှင့်သာလွန် parietal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 1834.36 မီလီမီတာ2, p = 10-4.26, BA ဘွဲ့ 19 နှင့် 39) ။ ကျား, မ၏အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ 0.005 မှာ FDR မှာ lGI-တန်ဖိုးများပြောင်းလဲဘို့တွေ့ရှိခဲ့သည်နှင့် gyrification အတွက်အသက်အရွယ်-related လျှော့ချ nonlinear နောက်တော်သို့လိုက် (ကုဗ) ဘယ်နေရာတွေမှာ (ပုံ 3).
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဒေသခံ Gyrification ညွှန်းကိန်း (lGI) ၏မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။
Gyrification အတွက်ခေတ်-Related Decrease ။
cortical ထူ, GM က-Volume ကိုနှင့် cortical ရဲ့ Surface ဧရိယာများတွင်အသက်အရွယ်-မှီခိုပြောင်းလဲမှုများ vertex-by-vertex ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
cortical အထူအထ-တိုကျရိုကျ (ဧရိယာအရွယ်အစား = 2608.63 မီလီမီတာအတွက်အထင်ရှားဆုံးလျော့နည်းသွား2, p = 10-7.13, BA ဘွဲ့ 6, 8 နှင့် 9) နှင့် rostral-အလယ်တန်း-တိုကျရိုကျ (ဧရိယာအရွယ်အစား = 12859.08 မီလီမီတာ2, p = 10-6.08, BA ဘွဲ့ 11, 44, 45 နှင့် 46) cortical လက်ဝဲကမ္ဘာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းနှင့်လက်ျာ hemisphere (ဧရိယာအရွယ်အစား = 14735.38 မီလီမီတာအတွက် precentral သီးပြွတ်၌2, p = 10-6.16, BA ဘွဲ့ 6, 44 နှင့် 45) (ပုံ 4) ။ အဆိုပါ cortical ထူကျဆင်းခြင်းတစ်ကုဗလမ်းကြောင်း (R ကိုတို့ကဖျောပွနိုငျ2 လက်ဝဲ rostral - အလယ်တန်း - တိုကျရိုကျ, R ကိုများအတွက် = 0.1912 လက်ဝဲသာလွန် - တိုကျရိုကျနှင့် R များအတွက် = 0.1262 = 0.134 ညာဘက် precentral ပြွတ်များအတွက်။ ထို့အပြင် GM-volume တွင်အသက် - မှီ။ နှစ်ဆတိုးမှုကျဆင်းမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၎င်းသည် super-frontal သို့ပြောင်းသွားသည် (area size = 45212.15 mm)2, p = 10-7.60, BA ဘွဲ့ 6, 8 နှင့် 9) ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလက်ဝဲ hemisphere နှင့်ပိုဒျ orbitalis (ဧရိယာအရွယ်အစား = 19200.11 မီလီမီတာမှ2, p = 10-6.68, BA ဘွဲ့ 44, 45 နှင့် 47) နှင့်ယုတ်ညံ့-parietal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 16614.72 မီလီမီတာမှ2, p = 10-5.03 လက်ျာ hemisphere ၏ BA ဘွဲ့ 19 နှင့် 39) ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (ပုံ 4) ။ GM က-အသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချကုဗဘယ်နေရာတွေမှာ (R ကိုနောက်တော်သို့လိုက်2 လက်ဝဲသာလွန် - တိုကျရိုကျ, R ကိုများအတွက် 0.1322 = 0.185 လက်ျာ pars orbitalis နှင့် R ကိုများအတွက်2 = 0.204 ညာဘက်ယုတ်ညံ့ parietal ပြွတ်များအတွက်) ။
GM က-Volume ကို, cortical ထူ, cortical ရဲ့ Surface Area နဲ့ Gyrification အကြားအသက်အရွယ်-Related အပြောင်းအလဲများ၏နှိုင်းယှဉ်။
မျက်နှာပြင်ဧရိယာ, ကြှနျုပျတို့ precentral (ဧရိယာအရွယ်အစား = 2296.99 မီလီမီတာတစ်သိသိသာသာလျှော့ချရေးကိုတွေ့2, p = 10-9.64, BA ဘွဲ့ 4), caudal အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ (ဧရိယာအရွယ်အစား = 609.mm2, p = 10-6.03, BA ဘွဲ့ 6) နှင့် supramarginal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 1647.24 မီလီမီတာ2, p = 10-4.88လက်ဝဲ hemisphere အတွက်, BA ဘွဲ့ 22) ပြွတ်။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ precentral (ဧရိယာအရွယ်အစား = 1371.37 မီလီမီတာအတွက်အထင်ရှားဆုံးညာဘက် hemisphere အတွက်လျော့နည်းသွား2, p = 10-6.34, BA ဘွဲ့ 4), ယုတ်ညံ့ parietal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 1248.36 မီလီမီတာ2, p = 10-5.99, BA ဘွဲ့ 7) နှင့်သာလွန် parietal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 652.77 မီလီမီတာ2, p = 10-4.11, BA ဘွဲ့ 7) cortical (ပုံ 4) ။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၌လျှော့ချအကောင်းဆုံးတစ်ကုဗလမ်းကြောင်း (R ခြင်းဖြင့်ဖော်ပြထားခဲ့သည်2 လက်ဝဲ precentral, R ကိုများအတွက် = 0.0952 = 0.026 caudal- အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ, R ကို2 = 0.024 supramarginal, R ကို left2 = 0.116 ညာဘက် hemisphere, R ကို2 = 0.156 ညာဘက်သာလွန် - parietal နှင့် R ကို2 = 0.046 ညာဘက် precentral ပြွတ်များအတွက်။ FDR ရှိ cortical အထူ၊ GM-volume နှင့်မျက်နှာပြင် area ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ကျား၊ မဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများမရှိသေးပါ
Gyrification, cortical ထူ, Surface ကဧရိယာနှင့် GM က / WM-Volume ကိုအကြားဆက်စပ်မှု
gyrification တွင်အကြီးဆုံးအသက်အရွယ်-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုမရွေးခဲ့ကြခြင်းနှင့် lGI-တန်ဖိုးများ cortical အထူ, cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် GM က / WM-Volume ကို (ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်နှင့်အတူ GM က / WM, 8 ဒေသများရှိ lGI-တန်ဖိုးများနှင့်အပြောင်းအလဲများကြားကဆက်ဆံရေးကိုအဘို့စမ်းသပ်ဖို့ပုံ 5, စားပွဲတင် 2) ။ ကျနော်တို့ lGI-တန်ဖိုးများနှင့်အတူ cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် GM က-အသံအတိုးအကျယ်အကြားကြီးမားသောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့သောဆက်ဆံရေး cortical အထူနှင့် lGI-ခန့်မှန်းချက်များအကြားဆက်စပ်မှုဘို့မတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တိုးမြှင့် WM-အသံအတိုးအကျယ်ကိုလည်းအများအပြားတိုကျရိုကျဒေသများနှင့် parietal cortex အတွက်ပိုကောင်း gyrification နှင့်အတူ GM က-အသံအတိုးအကျယ်နှင့်မျက်နှာပြင်ဧရိယာထက်အားနည်းကြားဆက်ဆံရေးဆိုသော်ငြားသိသိသာသာပြသခဲ့သည်။
FreeSurfers Desikan တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအရ lGI၊ Cortical ထူသောအထူ၊ GM-volume၊
အထူ, WM-, GM က-Volume ကိုနှင့် Surface ကဧရိယာနှင့်အတူယုတ် lGI-တန်ဖိုးများအကြားဆက်စပ်မှု။
Anatomical န့်သတ်ချက်များနှင့်ခေတ်များတွင်အပြောင်းအလဲများကြားက non-Linear ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး: တစ်ဦးက Vertex-by-Vertex ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
ကျနော်တို့ 16 (လက်ဝဲ hemisphere) နှင့်7ပဒေသာ (hemisphere) ရှိရာအသက်အရွယ်ကိုတွေ့2 နှင့် lGI အနုတ်လက္ခဏာ (ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်ပုံ S1) ။ အင်အားအကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်2lGI အပေါ်သက်ရောက်မှုလက်ဝဲသာလွန်-တိုကျရိုကျ (ဧရိယာအရွယ်အစား = 2147.01 မီလီမီတာအတွက်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီခဲ့သည်2, p = 10-5.48, BA ဘွဲ့ 8,9နှင့် 10), သာလွန်-parietal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 5233.35 မီလီမီတာ left2, p = 10-4.51, BA ဘွဲ့ 1, 2,3နှင့် 4) နှင့်လက်ဝဲ pericalcarine (ဧရိယာအရွယ်အစား = 243.34 မီလီမီတာ2, p = 10-3.80, BA ဘွဲ့ 17) ပြွတ်။ လက်ျာ hemisphere များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတစ်ဦး precentral ဒေသ (ဧရိယာအရွယ်အစား = 1165.59 မီလီမီတာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်2, p = 10-4.81, BA ဘွဲ့ 1, 2, 3,4နှင့် 6), postcentral (ဧရိယာအရွယ်အစား = 465.07 မီလီမီတာ2, p = 10-3.53, BA ဘွဲ့ 1,2နှင့် 3) နှင့် superiorfrontal cortical အတွက် (ဧရိယာအရွယ်အစား = 330.55 မီလီမီတာ2, p = 10-3.48, BA ဘွဲ့ 8) ။
lGI အပေါ်အသက်ကုဗသက်ရောက်မှု 18 (hemisphere left) နှင့်7ပဒေသာ (ညာ hemisphere) တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အင်အားအကောင်းဆုံးကုဗသက်ရောက်မှုနှင့်အတူနေရာများကြီးမားတဲ့သာလွန်-တိုကျရိုကျ (ဧရိယာအရွယ်အစား = 5598.96 မီလီမီတာအတွက်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီခဲ့သည်2, p = 10-6.54, BA ဘွဲ့ 8, 9, 10, 11, 45, 46 နှင့် 47), သာလွန်-parietal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 11513.02 မီလီမီတာ2, p = 10-6.11, BA ဘွဲ့ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 နှင့် 9) နှင့် pericalcarine (ဧရိယာအရွယ်အစား = 292.35 မီလီမီတာ2, p = 10-3.73လက်ဝဲ hemisphere အဘို့, BA ဘွဲ့ 17) စပျစ်သီးပြွတ်။ လက်ျာ hemisphere ခုနှစ်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးကုဗအသက်အရွယ်နှင့် lGI ဆက်ဆံရေးဟာ precentral (ဧရိယာအရွယ်အစား = 5862.33 မီလီမီတာအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်2, p = 10-5.52, BA ဘွဲ့ 6, 4,5နှင့် 7), caudal-middlefrontal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 503.66 မီလီမီတာ2, p = 10-3.56, BA ဘွဲ့ 8 နှင့် 9) နှင့်အလယ်တန်း-ယာယီစပျစ်သီးပြွတ် (ဧရိယာအရွယ်အစား = 152.44 မီလီမီတာ2, p = 10-2.98, BA ဘွဲ့ 21) ။
အသက်အရွယ်2 GMV အပေါ်သက်ရောက်မှု (လက်ဝဲ hemisphere မှချုပ်ထားခဲ့ကြသည်ပုံ S2) ။ အပြင်းထန်ဆုံးသက်ရောက်မှုများပိုဒျ opercularis (ဧရိယာအရွယ်အစား = 630.89 မီလီမီတာတိုးချဲ့အစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြ2, p = 10-4.35, BA ဘွဲ့ 13, 44 နှင့် 45), paracentral (ဧရိယာအရွယ်အစား = 495.23 မီလီမီတာ2, p = 10-4.11, BA ဘွဲ့ 4,6နှင့် 31) နှင့်ယုတ်ညံ့-parietal (ဧရိယာအရွယ်အစား = 144.45 မီလီမီတာ2, p = 10-3.71, BA ဘွဲ့ 39 နှင့် 22) cortical ။
GMV အပေါ်ကုဗအသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုလက်ဝဲ hemisphere အတွက်3cortical တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ gyrus cinguli (ဧရိယာအရွယ်အစား = 175.00 မီလီမီတာ၏ posterior အစိတ်အပိုင်းများအတွက်တဦးတည်းသီးပြွတ်2, p = 10-4.55, BA ဘွဲ့ 31), အ gyrus ယုတ်ညံ့ frontalis-ပိုဒျ opercularis- (ဧရိယာအရွယ်အစား = 124.78 မီလီမီတာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု2, p = 10-4.25, BA ဘွဲ့ 44) နှင့်သာလွန်ယာယီ sulcus (ဧရိယာအရွယ်အစား = 7.12 မီလီမီတာ၏ဘဏ်များ2, p = 10-3.61, BA ဘွဲ့ 39) သိသိသာသာအသက်အရွယ်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်3 နှင့် lGI ဆက်ဆံရေးမျိုး (ပုံ S2).
မှန် CT / SA: အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအသက်အရွယ်2/ အသက်အရွယ်3 ကျွန်တော်မှန် CT နှင့်လုပ် SA တွေ့ရှိဆိုးကျိုးများ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနှောက် cortex ၏ gyrification-ပုံစံအတွက်ကျယ်ပြန့်သောအပြောင်းအလဲမီးမောင်းထိုးပြ။ Previous post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာ  နှင့် MRI-လေ့လာမှုများ - နောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းမှာ lGI-တန်ဖိုးလျော့ကျပေမယ့်ပြောင်းလဲမှုအတိုင်းအတာကိုညွှန်ပြ, ပါဝင်ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းပါခန္ဓာဗေဒဖြစ်စဉ်ကိုအတူဆက်ဆံရေးမသိရသေးကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ lGI-တန်ဖိုးများအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးလျှော့ချဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ပြီးသော cortical ဒေသများ, precentral ယာယီနှင့်တိုကျရိုကျဒေသများဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဦးနှောက်ဒေသများ gyrification အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိပြုပြင်မွမ်းမံမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနှောက် cortex တစ်ဦးအပိုဆောင်း, အရေးကြီးသောပြုပြင်မွမ်းမံကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြု, cortical အထူနှင့် GM က-volume အတှကျအကွာအဝေးနှင့်အထက်ခဲ့ကြသည် GM ကပြောင်းလဲမှုများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဒေသများနှင့်အတူသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခေ။
IGl-အပြောင်းအလဲများ၏ cortical နေရာများ
gyrification အတွက်လျှော့ချဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအကြီးဆုံး cortical ဒေသ BA ဘွဲ့ 3,6နှင့်7ပါဝင်သည်သော precentral cortex အတွက်စပျစ်သီးပြွတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှု၌, GM က၏အထူနဲ့ volume ပြောင်းလဲမှုများယခင် longitudinal လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများနှင့်ကိုက်ညီသောတိုကျရိုကျ (BA 8 နှင့် 9) နှင့်ယာယီ (BA 20 နှင့် 21) cortical ကျော်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ  ဒါပေမယ့်သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူ lGI-တန်ဖိုးများယုတ်လျော့ခေ။
ယင်းထက်သာလွန် parietal cortex မှ / Post-အလယ်ပိုင်း gyrus, supramarginal gyrus အဖြစ်အကျူးတိုးချဲ့သော precentral စပျစ်သီးပြွတ်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အတွက်လျော့နည်းတသမတ်တည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပေမယ့်အဲဒီဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်အကြောင်း, အကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြောင်းအလဲများကို။ Ramsden et al နေဖြင့်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု။  မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းထောက်လှမ်းရေးအတွက်အတက်အကျလက်ဝဲမော်တာမိန့်ခွန်းဒေသများတွင် GM က-အပြောင်းအလဲများမှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ transcranial သံလိုက်ဆွ (TMS) နဲ့လေ့လာမှုများမှတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြသအဖြစ်အလားတူပင်မော်တာ cortex ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတိုးတက်မှုလည်းမရှိ  နှင့် EEG ။ ယင်းထက်သာလွန် parietal cortex အတွက် BOLD-လှုပ်ရှားမှု WM-ပစ္စည်းများကို၏ခြယ်လှယ်နေစဉ်အတွင်းသိသိသာသာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတိုးပြသထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ BA ဘွဲ့ 7, ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ် (WM) အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားသိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအခြေခံ cortical ကွန်ယက်များ, ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘို့အရေးကြီးသည် .
IGl-တန်ဖိုးများအတွက်သိသာသောအပြောင်းအလဲ၏တစ်ဦးကစက္ကန့်ဒေသတသမတ်တည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းခန္ဓာဗေဒနှင့်အပြုအမူများတွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သောတိုကျရိုကျ cortex ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ lGI-တန်ဖိုးတိုကျရိုကျတိုင် (BA 10), orbitofrontal cortex (BA 11) နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus (BA 47) တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်လျော့နည်းသွားသည်။ အလုပ်၏တစ်ဦးကကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်သည်ဤဒေသများတွင်ထိုကဲ့သို့သိမြင်မှုတားစီးအတွက်တိုးတက်မှုအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက်ဗဟိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြထားပြီး , အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ  နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ .
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ gyrification အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချအသိအမှတ်ပြုမှုကန့်ကွက်ထံအပ်နှံအစောပိုင်းအမြင်အာရုံဒေသများနှင့် cortical ဒေသများပါဝင်သည်ပေးသော BA ဘွဲ့ 19, 20 နှင့် 37 မှသက်ဆိုင်ရာတစ်သီးပြွတ်၌တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပြုပြင်မွမ်းမံအပြင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လည်းရိုးရှင်းပြီးရှုပ်ထွေးအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းအာရုံကြောလှိုအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ,  အဖြစ် ventral စီးအတွက်အရာဝတ္ထုအပြောင်းအလဲနဲ့၏ရငျ့နှင့်အတူ .
lGI အပေါ်အသက်အားကောင်းတဲ့ quadratic သက်ရောက်မှုလက်ဝဲသာလွန်-တိုကျရိုကျ (BA 8,9နှင့် 10) နှင့် righthemispheric တိုကျရိုကျ (Hogstrom et al နေဖြင့်ယခင်လေ့လာမှုနှင့်အညီဖြစ်သည့် (BA 8) ပြွတ်အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ။ ကုဗအသက်အရွယ်-lGI ဆက်ဆံရေးထက်သာလွန်-parietal (BA 8, 9, 10, 11, 45, 46, 47, 1, လက်ဝဲဘက်သာလွန်-တိုကျရိုကျ (BA 2, 3, 4, 5, 6,7နှင့် 8) တွင်ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုနေကြခြင်းနှင့် 9), ညာဘက် caudal-middlefrontal (BA 8 နှင့် 9) နှင့်အလယ်တန်း-ယာယီ (BA 21) ဒေသများ။
လက်ရှိဒေတာ, အရှင်ခြုံငုံ curvilinear နှင့်ကုဗသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းအချို့သောဒေသများနှင့်အတူတစ်ဦး linear ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဒုံးကျည်သွားလမ်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာထားတဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း gyrification ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများအပေါ်တစ်ဦးဝတ္ထုရှုထောင့်ပေးထားပါသည်။ သေးငယ်နမူနာအရွယ်အစားနှင့်အတူယခင်လေ့လာမှုများ ,  အများစုယာယီ, parietal နှင့်တိုကျရိုကျဒေသများတွင် GI-တန်ဖိုးများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Mutlu နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ  ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကအတည်ပြုမခံခဲ့ရသည့် prefrontal ဒေသများတွင်အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားများတွင်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးကမ်းပါးမတ် lGI ကျဆင်းခြင်းလေ့လာသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း cortical ခေါက်၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: GM က / WM-ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေး
အတော်ကြာယန္တရားများဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း gyrification အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အဆိုပြုထားပြီ ။ ဗန်အက်ဆင်း  အဆိုပါနှောက် cortex ၏ခေါက်ပုံစံ axon တလျှောက်စက်မှုတင်းမာမှုများကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်အကြံပြုသည်။ တင်းမာမှုအတူတကွပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြန်အလှန်ဒေသများခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့အဖြစ်ဤသီအိုရီအရ, gyri ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းထူထပ်နှင့်ဆက်စပ်ဒေသများအကြားစက်မှုတပ်ဖွဲ့များ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အခြားရွေးချယ်စရာအကောင့်အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက် cortical အလွှာအကြား differential ကိုကြီးထွား၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည် ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ cortical ခေါက်မျိုးရိုးဗီဇထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်  နှင့်လိင်-ကွဲပြားမှုဟာရင့်ကျက် cortex အတွက်တည်ရှိကြောင်း .
လက်ရှိလေ့လာမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း gyrification အတွက်လျှော့ချအခြေခံသည့်ယန္တယားသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုခွင့်ပြုမထားဘူးသော်လည်း, GM- ပြောင်းလဲမှုများနှင့် WM-parameters တွေကိုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် cortical ခေါက်ထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိအပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောခန္ဓာဗေဒပြုပြင်မွမ်းမံလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိမေးခွန်းကိုအဘို့အအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု၏အရေးပါသောတွေ့ရှိချက် lGI-တန်ဖိုးများအတွက်လျှော့ချ GM က၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အထူအတွက်လျှော့ချထံမှအကြီးအကျယ်ကွဲပြားနေသော cortical ဒေသများတွင်ပေါ်ပေါက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သိသာအသက်အရွယ်-မှီခိုလျှောက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် GM က / WM-parameters များကိုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ပြီးသောဒေသများအတွက် lGI-တန်ဖိုးများအကြားဆက်စပ်မှု cortical ခေါက်၏ဒီဂရီ GM က-အသံအတိုးအကျယ်နှင့်မျက်နှာပြင်ဧရိယာမှမည်သို့ပင်ဆိုစေဆက်စပ်ကြောင်း, သို့သော်, အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထူးသကျနော်တို့မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် GM က၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူတိုးပွားလာ lGI-တန်ဖိုးများအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရေးခဲ့တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီ GM က၏အထူများအတွက်အမှုမဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ WM-အသံအတိုးအကျယ်ကိုလည်း5cortical ဒေသများထဲက7အတွက်ပိုမိုမြင့်မား lGI-တန်ဖိုးများလှူဒါန်းခဲ့သည်။
Gyrification, အပြုအမူများနှင့် Psychopathology
lGI-တန်ဖိုးများယုတ်လျော့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း cortical ခေါက်ထဲမှာကျယ်ပြန့်လျှော့ချခြင်းနှင့်အတူဆက်စပ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနေသော်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်အပြောင်းအလဲများများအတွက်သက်ရောက်မှုတွေထူထောင်ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ယခင်သုတေသနတိုကျရိုကျဒေသများတွင် cortical ခေါက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုလူကြီးများအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်စဉ်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းညွှန်ပြထားပြီး  ထိုကဲ့သို့သောဘာဝနာအဖြစ်နှင့်အမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ, , သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အတွေ့အကြုံများ-မှီခို plasticity အတွက် cortical ခေါက်၏အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း gyrification အပေါ်သက်ရောက်မှု။
ထို့အပွငျ gyrification ပုံစံများသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူမှ gyrification နှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုနားလည်သဘောပေါက်၏အလားအလာအရေးပါမှုမျဉ်းတားထားတဲ့ psychopathology နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောသက်သေအထောက်အထား၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိ။ ထိုကဲ့သို့သော Williams က Syndrome (WS) နှင့် Autism Spectrum Disorders (ASDs) အဖြစ်အတော်ကြာ neurodevelopmental မမှန်, ပုံမှန်မဟုတ်သော cortical ခေါက်ပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အထူးသ WS နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုအဓိကကတော့ visuo-အပြုသဘောဆောင်တဲ့လိုငွေပြမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသော parieto-occipital ဒေသများတွင် sulci ၏အတိမ်အနက်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း ။ ဆနျ့ကငျြ, ASDs အတွက် gyrification ပုံစံများပုံမှန်အားဖြင့်ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့တိုးမြှင့်ခေါက်ဆွေမျိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ် .
Schizophrenia လည်းထစ်အငေါ့ gyrification ကပါဝင်ပတ်သက်သည့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလူကြီးဖို့အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းပုံမှန်စတင်ခြင်းနှင့်အတူပြင်းထန်သောစိတ်ရောဂါရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်လွန်  နှင့် MRI-လေ့လာမှုများ ,  အထူးသဖြင့်ထို့ပြင်မှာ-အန္တရာယ်ဘာသာရပ်များအတွက် schizophrenia များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သော prefrontal cortex ၌ cortical ခေါက်တစ်ခုတိုးလေ့လာတွေ့ရှိ ။ မကြာသေးမီကခေါက်ချွတ်ယွင်းလည်းပထမဦးဆုံး-ဇာတ်လမ်းတွဲစိတ္တဆင်းရဲသားကုသမှုတုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြခဲ့ကြ .
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာပြင်းပြင်းထန်ထန် cortical ခေါက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအဓိကပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကိုသည်းခံကြောင်းအကြံပြုသောကြောင့်, တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေအစောပိုင်း neurodevelopmental လွှမ်းမိုးမှုအပြင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သောဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု neocortex ၏ထစ်အငေါ့ခန္ဓာဗေဒနှင့်သိမြင်မှုအလုပ်မဖြစ်နှင့်လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဟာဦးနှောက် cortex ၏ဗိသုကာအတွက်အခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲများကပါဝငျသောအမြင်ထောက်ခံပါတယ်။ အထူးသကျနော်တို့ cortical ခေါက်ပုံစံများ precentral, တိုကျရိုကျနှင့်ယာယီဒေသများတွင်အထူးသဖြင့်, ထိုဦးနှောက် cortex ၏ကြီးမားသောဒေသများဖြတ်ပြီး gyrification အတွက်လျော့ချရေးကပါဝင်ပတ်သက်သည့်သိသာပြောင်းလဲမှုကိုခံယူကြောင်းကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သော fMRI နှင့် Meg အဖြစ် neuropsychological data နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်နည်းလမ်းများနှင့်အတူဆက်စပ်မှတဆင့်အပြုအမူ, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်များတွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါသောအပြောင်းအလဲအတွက်ဤပြုပြင်မွမ်းမံ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်စပ်မှုတည်ထောင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဖွဲ့လုံးကဦးနှောက်အတွင်းရှိဒေသခံ gyrification အညွှန်းကိန်း (lGI) ရက်နေ့တွင် Nonlinear အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှု, vertex-by-vertex ပျမ်းမျှ template ကိုဦးနှောက်ပေါ်သို့ projected လေ့လာဆန်းစစ်။ ထိပ်တန်း Row: ခေတ်2 သက်ရောက်မှုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် medial အမြင်များကနေ (ညာ) လက်ဝဲ hemisphere (လက်ဝဲ) နှင့်ညာဘက် hemisphere များအတွက်ရုပ်ပြနေကြသည်။ အောက်ခြေ Row: အသက်အရွယ်အကြားဆက်စပ်မှု3 နှင့် lGI နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် medial အမြင်များကနေ (ညာ) လက်ဝဲများအတွက်ပြသ (လက်ဝဲ) နှင့်ညာဘက် hemisphere နေကြသည်။ အပြာရောင်အရောင်များကိုပူနွေးအရောင်များ lGI တစ်ခုတိုးလာဘို့ coded နေကြသည်သော်လည်း, တိုးမြှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ lGI-တန်ဖိုးသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းဖော်ပြသည်။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း eTIV နှင့်အသက်အရွယ် (linear), ကျား, မများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ မှတ်ချက်: အသက်အရွယ်အကြားဘယ်သူမျှမကသိသိသာသာဆက်စပ်3 နှင့် lGI အသက်အရွယ် (linear) နှင့်အသက်, eTIV, ကျား, မများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်2.
တစ်ဖွဲ့လုံးကဦးနှောက်ထဲမှာ GMV အပေါ် Nonlinear အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှု, vertex-by-vertex ပျမ်းမျှ template ကိုဦးနှောက်ပေါ်သို့ projected လေ့လာဆန်းစစ်။ လက်ဝဲ: ခေတ်2 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် medial အမြင်ကနေလက်ဝဲ hemisphere များအတွက် GMV အပေါ်သက်ရောက်မှု။ ညာဘက်: အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှု3 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် medial အမြင်ကနေလက်ဝဲ hemisphere များအတွက်ရုပ်ပြနေကြသည်။ အပြာရောင်အရောင်များကိုပူနွေးအရောင်များ GMV တစ်ခုတိုးလာဘို့ coded နေကြသည်သော်လည်း, တိုးမြှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ GMV တစ်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းဖော်ပြသည်။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း eTIV နှင့်အသက်အရွယ် (linear), ကျား, မများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ မှတ်ချက်: အသက်အရွယ်အကြားဘယ်သူမျှမကသိသိသာသာဆက်စပ်3 နှင့် GMV အသက်အရွယ် (linear) နှင့်အသက်, eTIV, ကျား, မများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်2.
ကျနော်တို့ MRI data တွေကိုရှာမှီးနှင့်အတူအကူအညီတောင်းစန်ဒရာဆန့်ကျင်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းဟာမက်စ် Planck လူ့အဖွဲ့အစည်း (PJ Uhlhaas) ကနှင့်အမျိုးသားသုတေသနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ကိုရီးယားဖောင်ဒေးရှင်းက, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (R32-10142, အီးဟန်) ကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1 ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု Imaging Blakemore SJ (2012) ။ Neuroimage 61: 397-406 ။ [PubMed]
2 ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် imaging များအတွက်သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, ဗန် Leijenhorst L ကို, McGlennen KM (2012) စဉ်းစားပါ။ dev Cogn neuroscience 2: 293-302 ။ [PubMed]
3 ။ ကလေးအထူးကုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ Giedd ဖြစ်မှု, Rapoport JL (2010) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပြီးဘယ်မှာကျနော်တို့သွားမည်နည်း အာရုံခံဆဲလျ 67: 728-734 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Huttenlocher PR စနစ်ကလူ့ဦးနှောက် cortex ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၌ (1984) synapses ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် plasticity ။ နံနက် J ကို Ment Defic 88: 488-496 ။ [PubMed]
5 ။ Giedd ဖြစ်မှု, Jeffries NO, Blumenthal J ကို, Castellanos FX, Vaituzis AC အ, et al ။ (1999) ကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း schizophrenia: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးတက်သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 46: 892-898 ။ [PubMed]
6 ။ Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, Hayashi KM, Greenstein: D, et al ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (2004) Dynamic မြေပုံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 101: 8174-8179 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ pause T ကအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာအဖြူရောင်အမှု (2010) ကြီးထွား: myelin သို့မဟုတ် axon? ဦးနှောက် Cogn 72: 26-35 ။ [PubMed]
8 ။ pause T က, Zijdenbos တစ်ဦးက, Worsley K သည်, Collins က DL, Blumenthal J ကို, et al ။ Vivo လေ့လာမှုမှာ: ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ (1999) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရငျ့။ သိပ္ပံ 283: 1908-1911 ။ [PubMed]
9 ။ Tamnes CK, Ostby Y ကို, Fjell လေး, Westlye LT, ကြောင့်-Tonnessen P ကို, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက် (2010) ဦးနှောက်ရငျ့: cortical အထူနဲ့အဖြူကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့် microstructure အတွက်ဒေသဆိုင်ရာအသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကို။ Cereb Cortex 20: 534-548 ။ [PubMed]
10 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအဖြူကိစ္စရငျ့၏အချိန်ကိုက်အတွက်ကျယ်ပြန့်ဒေသဆိုင်ရာ gradients များအတွက် Colby JB, ဗန်ချို JD, Sowell ER (2011) ဘက်စုံအတွက် Vivo သက်သေအထောက်အထား။ Neuroimage 54: 25-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11 ။ Petanjek Z ကိုယုဒ M က, Simic, G, Rasin MR, Uylings HB, et al ။ လူ့ prefrontal cortex အတွက် Synaptic ကျောရိုး၏ (2011) ထူးကဲသော neoteny ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 108: 13281-13286 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Lebel ကို C, လူ့ဦးနှောက်ကိုဝါယာကြိုးများ၏ Beaulieu ကို C (2011) longitudinal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလူကြီးသို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေနေဆဲဖြစ်သည်။ J ကို neuroscience 31: 10937-10947 ။ [PubMed]
13 ။ Raznahan တစ်ဦးက, et al Lerch JP, Lee က N ကို, Greenstein: D, Wallace GL ။ ရင့်ကျက်နားချင်းဆက်မှီ၏ longitudinal neuroimaging လေ့လာမှု: လူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ညှိနှိုင်းခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲမှု (2011) ပုံစံများ။ အာရုံခံဆဲလျ 72: 873-884 ။ [PubMed]
14 ။ Uhlhaas PJ, အဆိုတော် W က (2011) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံကြော synchrony နှင့်အကြီးစား cortical ကွန်ရက်များ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုး: schizophrenia နဲ့ neurodevelopmental အယူအဆ၏ pathophysiology အဘို့ဆီလျော်။ Schizophr Bull 37: 514-523 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ pause T က, Keshavan M က, Giedd ဖြစ်မှု (2008) အဘယ်ကြောင့်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? နတ်ဗြာ neuroscience 9: 947-957 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Rakic ​​P ကို ​​(1995) ကိုဆဲလ်တစ်အသေးစားခြေလှမ်း, လူသားတွေအတွက်ဧရာမခုန်: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်း neocortical ချဲ့ထွင်တဲ့အယူအဆ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 18: 383-388 ။ [PubMed]
17 ။ Caviness VS Jr (1975) ဦးနှောက် convolutional ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စက်မှုပုံစံ။ သိပ္ပံ 189: 18-21 ။ [PubMed]
18 ။ အမ်းစထရောင်း, E, Schleicher တစ်ဦးက, Omran H ကို, Curtis က M, Zilles ငွေကျပ် (1995) လူ့ gyrification ၏ ontogeny ။ Cereb Cortex 5: 56-63 ။ [PubMed]
19 ။ Raznahan တစ်ဦး, ကို Shaw P ကို, et al Lalonde က F, Stockman M က, Wallace GL ။ (2011) ကိုမည်သို့သင့်ရဲ့ cortex ကြီးထွားသနည်း? J ကို neuroscience 31: 7174-7177 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Mutlu AK, Schneider က M, Debbane M က, Badoud: D, ဧလျေဇာက S, et al ။ အဆိုပါ cortex တလျှောက်လုံး (2013) လိင်အထူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ခေါက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု။ Neuroimage 82: 200-207 ။ [PubMed]
21 ။ su က S, White, T, Schmidt က M ကို, Kao CY, Sapiro, G (2013) သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေကနေလူ့ gyrification အညွှန်းကိန်း၏ Geometry နှင့်ဆိုင်သောတွက်ချက်မှု။ Hum ဦးနှောက် Mapp 34: 1230-1244 ။ [PubMed]
22 ။ Hogstrom LJ, Westlye LT, Walhovd KB, Fjell လေး (2012) အရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝတစ်လျှောက်နှောက် Cortex ၏ဖွဲ့စည်းပုံ: Surface ကဧရိယာ, အထူနှင့် Gyrification ၏ခေတ်-Related ပုံစံများ။ Cereb Cortex ။ [PubMed]
23 ။ Petermann က F, Petermann ဦး (2010) HAWIK-IV ။ Bern: Huber ။
24 ။ Tewes ဦး (1991) HAWIE-R ကို။ ဟမ်းဘတ်-Wechsler-Intelligenztest သားမွေး Erwachsene ။ Bern: Huber ။
25 ။ Dale လေး, Fischl B, Sereno MI (1999) cortical မျက်နှာပြင်-based ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဗြဲ segment နှင့်မျက်နှာပြင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး။ Neuroimage 9: 179-194 ။ [PubMed]
26 ။ Fischl B, ဗန် der Kouwe တစ်ဦးက, Destrieux ကို C, Halgren အီး, Segonne က F, et al ။ (2004) အလိုအလျောက်လူ့ဦးနှောက် cortex parcellating ။ Cereb Cortex 14: 11-22 ။ [PubMed]
27 ။ Fischl B, Dale လေး (2000) သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေကနေလူ့ဦးနှောက် cortex ၏အထူတိုင်းတာခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 97: 11050-11055 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ Fischl B, Sereno MI, Dale လေး (1999) cortical မျက်နှာပြင်-based ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ II ကို: ငွေကြေးဖောင်းပွမှု, flattening နှင့်မျက်နှာပြင်-based system ကိုသြဒိနိတ်။ Neuroimage 9: 195-207 ။ [PubMed]
29 ။ Fischl B, လျူတစ်ဦးက, Dale လေး (2001) အလိုအလျောက်ထူးထူးအပြားပြားခွဲစိတ်: လူ့ဦးနှောက် cortex ၏ဂျီဩမေတြီတိကျမှုနှင့် topologically မှန်ကန်သောမော်ဒယ်များတည်ဆောက်နေ။ ကို IEEE ဖြတ်ကျော် Med Imaging က 20: 70-80 ။ [PubMed]
30 ။ Desikan RS, Segonne က F, Fischl B, et al Quinn BT, Dickerson ဘီစီ။ (2006) အကျိုးစီးပွား gyral အခြေစိုက်ဒေသများသို့ MRI Scan ဖတ်ပေါ်ကလူ့ဦးနှောက် cortex subdividing များအတွက်တစ်ဦး automated တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစနစ်။ Neuroimage 31: 968-980 ။ [PubMed]
31 ။ Joyner AH, J ကို CR, Bloss CS, Bakken TE, Rimol LM, et al ။ နှစ်ခုလွတ်လပ်သောလူဦးရေအတွက်လူသားတွေအတွက်လျှော့ cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့်အတူ (2009) တစ်ဦးကဘုံ MECP2 haplotype အပေါင်းအသင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 106: 15483-15488 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ Bakken TE, Roddey JC, Djurovic S က, Akshoomoff N ကို, Amar DG, et al ။ လူသားများတွင်အမြင်အာရုံ cortical မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏အရွယ်တိုင်းနှင့်အတူ GPCPD2012 အတွက်ဘုံမျိုးဗီဇမျိုးကွဲများ (1) အသင်းမှ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 109: 3985-3990 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Rimol LM, Agartz ငါ Djurovic S ကိုဘရောင်းက AA ကို, Roddey JC, et al ။ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ microcephaly မျိုးဗီဇ၏ဘုံမျိုးကွဲများ (2010) လိင်-မှီခိုအသင်းအဖွဲ့။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 107: 384-388 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Rimol LM, Nesvag R ကို, Hagler DJ သမား Jr က Bergmann အို Fennema-Notestine ကို C, et al ။ (2012) cortical အသံအတိုးအကျယ်, မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် schizophrenia နှင့်စိတ်ကြွရောဂါအတွက်အထူ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 71: 552-560 ။ [PubMed]
35 ။ et al Schaer M က, Cuadra ကို MB, Tamarit L ကို, Lazeyras က F, ဧလျေဇာ S က။ (2008) ဒေသခံ cortical gyrification များကိုတွက်ချက်ရန်တစ်ဦးကမျက်နှာပြင်-based ချဉ်းကပ်။ ကို IEEE ဖြတ်ကျော် Med Imaging က 27: 161-170 ။ [PubMed]
36 ။ schizophrenia အတွက် prefrontal cortex ၏ Palaniyappan L ကို, Mallikarjun P ကိုယောသပ် V ကို, White, TP, Liddle PF (2011) ခေါက်: gyrification အတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 69: 974-979 ။ [PubMed]
37 ။ et al Schaer M က, Glaser B, Cuadra ကို MB, Debbane M က, Thiran JP ။ (2009) မွေးရာပါနှလုံးရောဂါ 22q11.2 ဖျက်မှု syndrome ရောဂါအတွက်ဒေသခံ gyrification သက်ရောက်သည်။ dev Med ကလေး Neurol 51: 746-753 ။ [PubMed]
38 ။ et al Schaer M က, Cuadra ကို MB, Schmansky N ကို, Fischl B, Thiran JP ။ (2012) ကိုဘယ်လို MR ပုံရိပ်တွေကနေ cortical ခေါက်တိုင်းတာရန်: ဒေသခံ gyrification အညွှန်းကိန်းတွက်ချက်ဖို့ခြေလှမ်း-by-step သင်ခန်းစာ။ Exp e3417 Vis J ကို။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Fjell လေး, Westlye LT, Greve DN, Fischl B, Benner T က, et al ။ (2008) အဖြူကိစ္စဂုဏ်သတ္တိများ၏အစီအမံအဖြစ်ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်နှင့် volumetry အကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ Neuroimage 42: 1654-1668 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 40 Salat DH, Greve DN, Pacheco JL, Quinn BT, Helmer KG ။ nondemented အိုမင်းခြင်းနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်ဒေသတွင်းအဖြူကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ကွဲပြားမှု (2009) ။ Neuroimage 44: 1247-1258 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ Buckner RL, ဌာနမှူး: D, က Parker J ကို, Fotenos AF, Marcus: D, et al ။ စုစုပေါင်း intracranial ပမာဏ၏လက်စွဲတိုင်းတာခြင်းဆန့်ကျင်ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းနှင့်အတည်ပြု: အလိုအလျောက် Atlas-based ဦးခေါင်းအရွယ်အစားပုံမှန်သုံးပြီးငယ်ရွယ်ဟောင်းနှင့် demented လူကြီးများအတွက် morphometric နှင့် functional data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် (2004) တစ်ဦးကစုစည်းချဉ်းကပ်နည်း။ Neuroimage 23: 724-738 ။ [PubMed]
42 ။ မိစ္ဆာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းကို အသုံးပြု. အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging အတွက်စာရင်းအင်းမြေပုံ၏ Genovese CR, Lazar NA, Nichols T က (2002) တံခါးခုံကို။ Neuroimage 15: 870-878 ။ [PubMed]
43 ။ Cohen ကိုဂျေ (1988) ကအမူအကျင့်သိပ္ပံအဘို့အစာရင်းအင်းပါဝါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Hillsdale, NJ လောရင့် Earlbaum Associates မှ။
44 ။ Ramsden S က, et al ရစ်ချတ်ဆန် FM ရေ, Josse, G, သောမတ်စ် MSc, အဲလစ်, C, ။ (2011) နှုတ်ဖြင့်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ထဲမှာ Non-နှုတ်ထောက်လှမ်းရေးအပြောင်းအလဲများကို။ သဘာဝတရား 479: 113-116 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Garvey MA, Ziemann ဦး, Bartko JJ, Denckla ကို MB, Barker, CA, et al ။ ကျန်းမာတဲ့ကလေးတွေအတွက် neuromotor ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (2003) cortical Correlate ။ Clin Neurophysiol 114: 1662-1670 ။ [PubMed]
46 ။ လယ်သမား SF, Gibbs J ကို, Halliday DM, Harrison LM ဂျိမ်းစ် LM, et al ။ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုစဉ်အတွင်းရှည်လျားတိုတောင်းလက်မ abductor ကြွက်သားများအကြားတွေ့ရစဉ်ကွက်တိဝင်များတွင် (2007) အပြောင်းအလဲများ။ J ကို Physiol 579: 389-402 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47 ။ မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်အတွက်သတင်းအချက်အလက် manipulate နိုင်စွမ်း၏ Crone EA ၏, Wendelken ကို C, Donohue S က, ဗန် Leijenhorst L ကို, Bung လုပ် SA (2006) Neurocognitive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 103: 9315-9320 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
48 ။ ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K သည်, အမှား-related ဖြစ်စဉ်များစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့် anterior cingulate စဉ်အတွင်းညာဘက်ယုတ်ညံ့နံရံပစ်ကစားနည်း-striato-cerebellar ကွန်ရက် Smith က AB, တေလာအီး, Brammer M (2007) Linear အသက်အရွယ်-ဆက်နွယ်နေကြောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Hum ဦးနှောက် Mapp 28: 1163-1177 ။ [PubMed]
49 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, et al ။ (2006) orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို neuroscience 26: 6885-6892 ။ [PubMed]
50 ။ Blakemore SJ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူမှုရေးဦးနှောက်၏ (2008) ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ QJ Exp Psychol (Hove) 61: 40-49 ။ [PubMed]
51 ။ Werkle-Bergner M က, ကာရှင်း YL, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေအသက်ကြီးမှအမြင်အာရုံနိုင်တဲ့ coding ထဲမှာ Muller V ကိုလီ SC, Lindenberger ဦး (2009) EEG gamma-band ထပ်တူ: သက်သေအထောက်အထားများ evoked အာဏာနှင့်အချင်းချင်းစမ်းသပ်အဆင့်သော့ခတ်ကနေ။ Clin Neurophysiol 120: 1291-1302 ။ [PubMed]
52 ။ Uhlhaas PJ, Roux က F, အဆိုတော် W က, Haenschel ကို C, Sireteanu R ကို, et al ။ (2009) အာရုံကြော synchrony ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတညျလူသားတို့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်နှောင်းပိုင်းကရငျ့နှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထင်ဟပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 106: 9866-9871 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Golarai, G, Ghahremani DG, Whitfield-Gabrieli S က, Reiss တစ်ဦးက, Eberhardt JL, et al ။ (2007) အဆင့်မြင့်အမြင်အာရုံ cortex ၏ Differential ဖှံ့ဖွိုးတိုးအမျိုးအစား-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အသိအမှတ်ပြုမှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ နတ် neuroscience 10: 512-522 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ Zilles K ကို Palomero-Gallagher N ကို, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ontogeny စဉ်အတွင်း cortical ခေါက်၏ Amunts ငွေကျပ် (2013) ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 36: 275-284 ။ [PubMed]
55 ။ ဗန်အက်ဆင်း, DC (1997) ကဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် morphogenesis နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဝါယာကြိုးများ၏တင်းမာမှု-based သီအိုရီ။ သဘာဝတရား 385: 313-318 ။ [PubMed]
56 ။ ရော်ဂျာ J ကို, Kochunov P ကို, Zilles K ကို Shelledy W က, Lancaster J ကို, et al ။ မျောက်ဝံများအတွက် cortical ခေါက်နှင့်ဦးနှောက် volume ၏မျိုးဗီဇဗိသုကာတွင် (2010) ။ Neuroimage 53: 1103-1108 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57 ။ Luders အီး, ဇာတ်ကြောင်း KL, Thompson ကလေး, Rex DE, Jancke L ကို, et al ။ cortical ရှုပ်ထွေးအတွက် (2004) ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ နတ် neuroscience 7: 799-800 ။ [PubMed]
58 ။ Fornito တစ်ဦးက, Yucel M က, Wood က S ကိုစတူးဝပ် GW, Buchanan ဂျာ et al ။ anterior cingulate / paracingulate shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ (2004) တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကျန်းမာယောက်ျားအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ Cereb Cortex 14: 424-431 ။ [PubMed]
59 ။ Luders အီး, Kurth က F, Mayer EA ၏, Toga AW, ဇာတ်ကြောင်း KL, et al ။ (2012) တရားအားထုတ်ယောဂီများ၏ထူးခြားသောဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒ: cortical gyrification မြားတှငျပွောငျးလဲ။ တပ်ဦး Hum neuroscience 6: 34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
60 ။ Kippenhan JS, Olsen RK, Mervis သမဝါယမ, မောရစ်, CA, Kohn: P, et al ။ လူ့ gyrification မှ (2005) မျိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများကို: Williams က syndrome ရောဂါအတွက် sulcal morphometry ။ J ကို neuroscience 25: 7840-7846 ။ [PubMed]
61 ။ autistic နှင့် Asperger မမှန်အတွက် Jou RJ, Minshew NJ, Keshavan က MS, Hardan AY (2010) cortical gyrification: တစ်ပဏာမသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ J ကိုကလေး Neurol 25: 1462-1467 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ et al Vogeley K ကို Schneider-Axmann T က, Pfeiffer ဦး, Tepest R ကို, Bayer က TA ။ (2000) အထီး schizophrenic လူနာအတွက် prefrontal ဒေသ၏ gyrification နှောင့်အယှက်: တစ်ဦးက morphometric postmortem လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 157: 34-39 ။ [PubMed]
63 ။ schizophrenia အတွက် Kulynych JJ, Luevano LF, ဂျုံးစ် DW, Weinberger DR (1997) cortical မူမမှန်: အ gyrification ညွှန်းကိန်းတစ်ခုအတွက် Vivo လျှောက်လွှာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 41: 995-999 ။ [PubMed]
64 ။ schizophrenia အတွက် Palaniyappan L ကို, Liddle PF (2012) ထစ်အငေါ့ cortical gyrification: တစ်မျက်နှာပြင်-based morphometry လေ့လာမှု။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု neuroscience 37: 399-406 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65 ။ Harris က JM, Whalley H ကို, Yates က S, Miller က: P, ဂျွန်စ EC, et al ။ High-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် (2004) ပုံမှန်မဟုတ်သော cortical ခေါက်: schizophrenia များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးခန့်မှန်း? Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 56: 182-189 ။ [PubMed]
66 ။ Palaniyappan L ကို, Marques TR, တေလာ H ကို, Handley R ကို, Mondelli V ကို, et al ။ (2013) cortical ပထမဇာတ်လမ်းတွဲစိတ္တဆင်းရဲသားကုသမှုတုံ့ပြန်မှု၏အမှတ်အသားများအဖြစ်ချို့ယွင်းချက်ခေါက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု 70: 1031-1040 ။ [PubMed]